Moving to Canada from Zimbabwe: Immigration to Canada from Zimbabwe
Home / Canadian Immigration / Country Immigration to Canada / Zimbabwe to Canada
Moving from Zimbabwe to Canada
Learn the various pathways of immigration to Canada from Zimbabwe, including family-sponsorship and employment.
Interested in Immigrating to Canada from Zimbabwe?
Zimbabwean Canadians are Canadian citizens of Zimbabwean descent or those who were born in Zimbabwe but live in Canada. There are over 12,000 Zimbabwean Canadians living in Canada. The movement of Zimbabwean immigrants to Canada began in the 1980s after Zimbabwe gained their independence. The largest influx of Zimbabweans moving to Canada started in the 2000s when poverty and political oppression heightened in Zimbabwe.
Zimbabwe Community in Canada
There are several areas that the majority of Zimbabwean Canadians reside in Canada including: Vancouver, Toronto, Calgary, Montreal, Edmonton, and St. John’s.
Ontario is the most popular Canadian province for Zimbabwean Canadians. Ontario is where 60% of all Zimbabwean immigrants settle followed by Alberta (13%), British Columbia (12%), and Quebec (12%).
Many Zimbabwean Canadians believe that they play an important role in the development of Zimbabwe by sending money. About 66% of Zimbabweans living in Canada send money back to Zimbabwe. By sending money back to Zimbabwe do so to improve fundraising for projects, investment in business/infrastructure, developing new projects, charity, and family support.
Useful Resources for Zimbabweans in Canada
Canada Zimbabwe Relations
Zimbabwean Expats in Canada
Facebook Support Group for Zimbabweans in Canada